ရှေးကောကျပှဲကာလ ကိုဗဈနဲ့အခွားစိနျချေါမှုမြား – Voice of Myanmar
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးဟာ နီးသထကျနီးလာနပေါပွီ။ တဈကမ်ဘာလုံးနီးပါးရငျဆိုငျနရောတဲ့ ကိုဗဈရောဂါကပျဆိုးကွီးကလညျး စိုးရိမျရဆဲကာလမှာရှိနဆေဲပါ။ ရှေးကောကျပှဲမဲဆှယျဖို့ သတျမှတျမယျ့ ရကျ ၆၀ကာလဟာလညျး နီးကပျနပွေီမို့ ဘယျလို ဘေးကငျးအောငျ မဲဆှယျကွမလဲ? တခွားအခကျခဲတှကေရော ဘာတှရှေိနိုငျမလဲ ? လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ ဝငျပွိုငျကွမယျ့ ကိုယျစားလှယျသဈတှေ၊ အရငျရှေးကောကျပှဲတှမှော ပါဝငျယှဉျပွုငျဘူးတဲ့ လကျရှိကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ VOM က စကားဝိုငျးလုပျပွီး ဆှေးနှေးအဖွရှောဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီစကားဝိုငျးမှာ ပွညျသူ့ပါတီကနေ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျအတှကျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒျေါနိုငျနိုငျမျော ၊ ပွညျထောငျစုကွံခိုငျဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီအတှကျ အမရပူရမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောနရောအတှကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးသိနျးထှနျးဦးတို့နဲ့အတူ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီရဲ့ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးတငျအောငျတို့ ပါဝငျဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။
ဦးသိနျးထှနျးဦးက ၂၀၁၀မှာ သူတို့ မဲဆှယျစညျးရုံးတဲ့အခွအေနနေဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့အတှအေ့ကွုံတှေ ပွနျပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ဦးတငျအောငျကလညျး ၂၀၁၅မှာ အလှပွယာဉျတှေ လူစုလူဝေးတှနေဲ့ မဲဆှယျခဲ့ရတဲ့အနအေထားတှကေို ပွနျပွောပွရငျး ခုလကျတှဖွေ့ဈသငျ့တာတှကေို စပွောပါတယျ။
“တဈခုလေးပွောစရာရှိတာက ကတြျောတို့ဆီက အရငျတုနျးကလို ကိုဗဈကာလလိုဟာမြိုး မဖွဈခဲ့ဘူးဆိုရငျတော့ ၂ လဆိုတဲ့အခြိနျဟာ သိပျပွီးတော့ပွဿနာမရှိပမေယျ့ အခုမှစပွီးဝငျလာကွမယျ့ ပါတီသဈလေးတှေ ပါတီသဈလို့ပဲပွောပါမယျ၊ ပါတီသေးလို့ ကတြျောမပွောရကျပါဘူး ဘာလို့ဆိုတော့ ပါတီသဈပေါ့ဗြာ ပါတီသဈတှအေတှကျတော့ ပွညျသူနဲ့ မိတျဆကျရမယျ့အခနျးကဏ်ဍဟာ ၂ လဆိုရငျတော့ အငျမတနျမှနညျးလှနျးတယျလို့မွငျတယျလေ။ ရကျပေါငျး ၆၀ အတှငျးမှာ တခွားအမရေိကနျလိုနိုငျငံမြိုး နှိုငျးယှဉျပွောတာမဟုတျဘူး သူတို့ကတော့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတဈယောကျဟာ တဈအိမျတကျဆငျးလုပျပွီးတော့ ပွောမယျပေါ့လေ ကတြျောတို့က ကိုဗဈကာလ ၁၅ ယောကျဆိုလို့ရှိရငျ လူစုလူဝေးလုပျလို့ရတယျ ၊ အကယျ၍ ကိုယျစားလှယျလောငျးတဈယောကျဟာ မိမိပါတီရဲ့မူဝါဒ မိမိရဲ့ ရှလေု့ပျရမယျလုပျငနျးစဉျနဲ့ တဈအိမျဝငျတဈအိမျထှကျ ဝငျထှကျဆှေးနှေးမယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာအကောငျးဆုံးပေါ့လေ သို့သျော ၂ လ အခြိနျအတှငျးဆိုရငျ ဘယျလိုမှအဆငျမပွနေိုငျသေးဘူး ၊ လကျရှိ အာဏာရလို့တော့ မပွောလိုပါဘူး၊ ပါတီကွီးတှပေေါ့လေ ပွညျသူနဲ့မိတျဆကျပွီးသား ပွညျသူကသိပွီးသားဆိုတဲ့ ပါတီကွီးတှအေတှကျကတော့ သိပျပွဿနာမရှိပမေယျ့ နောကျထပျပါတီအသဈတှအေတှကျကတော့ တျောတျောလေး အခကျအခဲရှိမယျလို့ထငျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အခြိနျတှတေိုးပေးမယျဆိုရငျတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့ ဒါကတော့ ကာလအနအေထားကိုမွငျလို့ပွောတာပါ။ အကယျ၍ ကိုဗဈကာလလညျးမဖွဈဘူး ၂၀၁၅တုနျးကလို ၂၀၁၀တုနျးကလို လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျဆိုတာဒီလိုပါ ရောဂါကိုကွောကျနစေရာမလိုဘဲနဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့ အုနျးအုနျး အုနျးအုနျးနဲ့ သှားလို့ရမယျဆိုရငျတော့ သိပျပွဿနာမရှိဘူးပေါ့လေ ၂ လဆိုတာနညျးတယျဆိုတာ ကတြေျာ့စိတျထဲမွငျပါတယျ “ လို့ ဦးတငျအောငျက သူ့သဘောထားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောသှားပါတယျ။
ပွညျသူ့ပါတီက ဒျေါနိုငျနိုငျမျောကတော့ တခြို့ညှနျကွားခကျြတှကေ ရှငျးလငျးတိကမြှုမရှိလို့ စိုးရိမျစရာရှိတဲ့အကွောငျးတှကေို ခုလိုဆှေးနှေးပါတယျ။
“ ဒီနှဈမှာမှ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ တဈကမ်ဘာလုံးရငျဆိုငျနရေတဲ့ ကပျရောဂါနဲ့ကွုံတှတေဲ့အခါမှာ ဒါဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲဖွဈစဉျကွီးဆိုတော့ ရှပေို့ငျးမှာပွောဆိုလှုပျရှားခဲ့တဲ့ Plan တှကေတော့ ပုံစံတှပွေောငျးသှားတယျ၊ အဓိကကတော့ ညှနျကွားခကျြရယျလို့ သီးသနျ့မရှိသေးဘူး။ ပွညျသူလူထုရဲ့ကနျြးမာရေးသညျ နံပါတျ ၁ ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကနပွေီးတော့ ခဉျြးကပျမယျ။ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကနေ ခဉျြးကပျတဲ့အခါမှာ ဘာတှရေငျဆိုငျနရေလဲဆိုတော့ ကိုယျစားလှယျတဈယောကျရဲ့ စညျးရုံးရေးကာလတှရေောကျတော့မယျ ကိုယျစားလှယျတဈယောကျရဲ့ စညျးရုံးရေးမှာတောငျမပွောနဲ့ ပါတီစညျးရုံးရေးမှာတောငျမှ အခုအခငျးအကငျြးက တျောတျောလေးကို ခကျခဲ၊ကပျြတညျးနတေယျပေါ့ အဲ့ဒီလိုရငျဆိုငျနရေတဲ့အခါမှာ Plan 1,2ဆိုပွီးတော့ခထြားတယျ၊ နောကျတဈ ခကျြစောငျ့နတော ဘာလညျးဆိုတော့ UEC ရဲ့ထုတျပွနျခကျြမြိုးကို ကမြတို့မြှျောလငျ့နတေယျ။ အခုဟာက သို့လော သို့လောတှဖွေဈနတေယျ၊ အစိုးရရဲ့ထုတျပွနျခကျြတှရှေိတယျ၊ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာရဲ့ ထုတျပွနျခကျြတှရှေိတယျ၊ ဒသေန်တရရဲ့ ကနျြးမာရေးထုတျပွနျခကျြတှရှေိတဲ့အခါ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ရဲ့ ထုတျပွနျခကျြတှအေကုနျလုံးဟာ အခုသှားမယျ့ရှေးကောကျပှဲ ကမြတို့ပါတီတှအေတှကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဥပဒမေူဘောငျဖွဈရဲ့လား၊ လှပျလပျပွီးမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့ရာ အခုလိုကိုယျစားလှယျတှရေဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကာလကို သှားမယျ့ဟာကို သီးသနျ့မူဝါဒ တှခေပြေးဖို့မြားရှိမလားဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတဈခုကိုတော့ စောငျ့နတေယျပေါ့။”
ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီက ဦးသိနျးထှနျးဦးကတော့ တခြို့ပွညျထောငျစုအဆငျ့တာဝနျရှိသူတှေ ပါတီလုပျငနျးတှလေုပျလို့ရပွီး ရှေးကောကျပှဲနဲ့ဆိုငျတာတှလေုပျနတောတှဟော မြှတမှုနညျးတာကွောငျ့ ဒီဥပဒတှေကေို ပွနျလညျသုံးသပျဖို့လိုတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“အခု ဇူလိုငျ ၁ ရကျနကေ့စပွီးတော့ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ဝနျကွီး၊ ဒုဝနျကွီးတှေ မဲဆှယျ၊ ပါတီလုပျငနျးလဲလုပျလို့ရတယျဆိုတဲ့ဟာမြိုး ထှကျပျေါလာတယျ။ စညျးရုံးရေးနဲ့ ပါတီလုပျငနျးလို့ ဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတျောသမ်မတလညျးပါမယျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးတှလေညျးပါမယျ၊ သူက ၇ (ခ)နဲ့ ၁၇(ဃ)ကို ကုဒျလုပျပွီးတော့ UECက ရှေးကောကျပှဲစတငျ ပွုလုပျမယျ့ရကျကို စတငျကွငွောတဲ့ရကျကစပွီးတော့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့ နိုငျငံတျောသမ်မတပါတာပေါ့နျော အဲ့ဒါတှကေ ဒီလုပျငနျးတှကေို ဆောငျရှကျခှငျ့ရှိတယျဆိုပွီးတော့ ဒီလိုဖျောပွလာတယျ၊ ဒါက ၁ .၇.၂၀၂၀မှာ အံ့သွဖို့ကောငျးတာက ၂.၇.၂၀၂၀ မှာ UEC ကနပွေီးတော့ သကျဆိုငျရာကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲအစားထိုးလိုကျတာက နိုငျငံရေးပါတီတှဟော ၎င်းငျးတို့ရဲ့ပါတီရုံးတှငျးမှာလုပျနတေဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှကေို ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာရဲ့ ကနျ့သတျခကျြမြားနဲ့အညီ ဆောငျရှကျခွငျးရှိမရှိ ကွပျမတျဆောငျရှကျရနျဆိုတဲ့ အခွားသောနိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကိုအကွောငျးပွပွီးတော့ ဒီလိုညှနျကွားခကျြထုတျတဲ့စာ ကတြျောတို့သှားတှတေ့ယျ။ တဈဖကျမှာကွတော့ အနိုငျရအဖှဲ့ကို ၁ ရကျနမှေ့ာ ဒီအခှငျ့အရေးကိုပေးတယျ၊ တဖကျမှာကွတော့ သူတို့ကိုကွပျမတျထားတယျဆိုတဲ့ဟာမြိုး ကောငျးပွီ ဒါဆိုရငျစောစောတုနျးက UEC ကုဒျလုပျထားတဲ့ ၇ (ခ)နဲ့ ၁၇ (ဃ) ကို ပွောမယျဆိုရငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပေုဒျမ ၄၉၉မှာ နိုငျငံတျောမှာရှိနတေဲ့ ဥပဒတှေရေဲ့အခွခေံဥပဒဟော ၂၀၀၈အခွခေံဥပဒကွေီးလို့ သတျမှတျပွဌာနျးထားတယျ။ ဒီတညျဆဲဥပဒတေဈခုဟာတဲ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောက ပွငျဆငျခွငျး၊ ပယျဖကျြခွငျးမပွုသေးဘူးဆိုရငျ အခွခေံဥပဒနေဲ့မဆနျ့ကငျြသမြှ အတညျဖွဈတယျလို့ ဖျောပွထားတယျ၊ အဲ့ဒါက ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပေုဒျမ ၄၄၆ မှာ ဖျောပွထားတယျ။ ဒါဆိုလို့ရှိရငျ စောစောက ၇(ခ)နဲ့ ၁၇(ဃ)ကို ကတြျောက ဘာနဲ့သှားပွနျပွီးတော့ နှိုငျးလဲဆိုလို့ရှိရငျ ၆၄ မှာ နိုငျငံတျောသမ်မတဟာ ပါတီလုပျငနျးမြားကို ၎င်းငျးရဲ့ တာဝနျသကျတမျးအတှငျးမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျခွငျးမပွုရဘူး။ ၂၃၂ ဋ မှာလညျး ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ဝနျကွီးတှဟော ၎င်းငျးတို့ရဲ့ရာထူးသကျတမျးအတှငျးမှာ ပါတီလုပျငနျး ဆောငျရှကျခွငျးမပွုရဆိုပွီးတော့ ဖျောပွထားတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ဒီဥပဒလေိုဟာမြိုးတှကေိုလညျး သုံးသပျဖို့လိုလိမျ့မယျလို့ ဒီနရောမှာ ကွားဖွတျကလေး ဆှေးနှေးတငျပွလိုပါတယျ။ “
ဦးသိနျးထှနျးဦးက အဲဒီလိုဆိုတယျဆိုတော့ ရှနေ့လေညျးဖွဈ လကျရှိအာဏာရပါတီရဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးတငျအောငျရဲ့ သဘောထားဘယျလိုရှိမလဲဆိုတော့ “မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ရတယျလို့ ပွောတာမဟုတျဘူး ပါတီနယျမွစေညျးရုံးခှငျ့ပေါ့လေ နိုငျငံသားတဈယောကျရဲ့ အခှငျ့အရေးရပိုငျခှငျ့ကို မဆုံးရှုံးစရေနျအလို့ငှာအတှကျ နယျမွစေညျးရုံးရေးလုပျငနျးနဲ့ ပါတီစညျးရုံးရေးလုပျငနျးတှလေုပျလို့ရတယျ၊ သို့သျော ကနျပိနျးအဆငျ့တော့ လုပျလို့မရသေးဘူး ဒါကတော့ အကုနျတနျးတူညီမြှအခှငျ့အရေးပါပဲ။” လို့ ပွနျလညျခပြေပါတယျ။ ဒါဆို ခုမှရှေးကောကျပှဲဝငျပွိုငျမယျ့ အရငျကသတငျးထောကျအလုပျလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ ပွညျသူ့ပါတီက ဒျေါနိုငျနိုငျမျောကရော အရငျ ၂၀၁၀ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနဲ့ ၂၀၁၅ နောကျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျတို့ ခွားနားခကျြဘာရှိလဲဆိုတော့
“၂၀၁၅မှာ UECမှာ ဘာရှိလညျးဆိုတော့ အရငျဦးဆုံး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာဆိုတာရှိတယျ။ အဲ့ဒါက အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှပေေါ့နျော အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှကေ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာဆိုပွီးတော့ အခုခြိနျမှာ စောငျ့ကွညျ့ဆိုတာကို ဖွုတျလိုကျတယျ၊ လလေ့ာဆိုတာပဲထားလိုကျတယျ။ ဒါက ပထမဦးဆုံး ကှငျးကှငျးကှကျကှကျမွငျလိုကျရတဲ့အခကျြပေါ့နျော၊ ဘာကွောငျ့မို့လို့ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတှကေ ရှေးကောကျပှဲကို စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာကွတာလဲဆိုတဲ့အခကျြကို စဉျးစားတယျ။ စဉျးစားတော့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှုအားနညျးနသေေးတယျ၊ နောကျ ဥပဒမေူဘောငျတှေ ခိုငျမာမှုအားနညျးတယျ၊ ပွီးတော့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံဆိုတာကိုသှားနသေေးတဲ့ ကမြတို့လိုနိုငျငံတှမှော တရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲကို ငွိမျးငွိမျးခမျြခမျြးနဲ့ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့ရာအတှကျ အခုလိုမြိုးလလေ့ာစောငျ့ကွညျ့တဲ့အဖှဲ့တှေ ရှိကိုရှိနသေငျ့တယျ။ အဲ့ဒါက စံနှုနျးတဈခုပဲ ကမြတို့က အဲ့ဒါကို ကွိုဆိုတယျ၊ ဖိတျချေါတယျ၊ အဲ့ဒါမြိုးတှရှေိနဖေို့လညျးမြှျောလငျ့တယျ။ ဒီခြိနျမှာ စောငျ့ကွညျ့ဆိုတာကို ဖွုတျလိုကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ လလေ့ာမှုတဈခုပဲရှိတဲ့အတှကျ ဘာပါဆုံးရှုံသှားသလဲဆိုရငျ ဆကျစပျပေါ့ မီဒီယာရဲ့အခနျးကဏ်ဍပါလြော့နညျးသှားတယျ။ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာတဲ့သူတှဟော သူတို့ရဲ့တှရှေိ့ခကျြတှေ စောငျ့ကွညျ့ခကျြတှေ ခိုငျမာတဲ့အထောကျအထားတှကေိုငျပွီးတော့ သူတို့ကအခြိနျနဲ့တပွေးညီ စာတနျးတှထေုတျပွနျနတေယျ၊ အဲ့ဒီအခကျြအလကျတှကေို ကိုးကားပွီးတော့ မီဒီယာတှကေလညျး သူတို့ရဲ့တှရှေိ့ခကျြတှနေဲ့ သူတို့တှကေိုသှားပွီးတော့ အငျတာဗြူးမယျ၊ ပွညျသူလူထုကို အခြိနျနဲ့တပွေးညီခပြွမယျ။ ဒီလိုကနျ့သကျလိုကျခွငျးဟာ ပွညျသူလူထုရဲ့သိပိုငျခှငျ့ လှတျလပျပိုငျခှငျ့ထိခိုကျတယျဆိုတော့ ပါတီငယျတှေ အခုမှဝငျလာတဲ့သူတှအေတှကျ ပိုပွီးတော့နဈနာရတယျပေါ့ ဒါကတော့ မွငျရတဲ့အခကျြပေါ့။ နောကျထပျအခကျြတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတော့ ရှေးကောကျပှဲ မဲလကျမှတျတှကေို ရိုကျနှိပျတဲ့အခြိနျမှာ အရငျတုနျးက နပွေညျတျောမှာ ရိုကျတယျ၊ ၂၀၁၅ မှာတုနျးက မဲလကျမှတျရိုကျတာကို စောငျ့ကွညျ့ခှငျ့ရှိတယျ။ ဘယျလောကျရိုကျသလဲ ဘယျသယျသှားလဲ၊ ဘာလုပျလဲဆိုတာ အခကျြအလကျတှကေိုကွညျ့ပွီးတော့ မဲလကျမှတျက ဘယျလောကျရှိနပွေီ ဘယျလောကျ ရိုကျသလဲဆိုတာကိုကွညျ့ပွီးတော့သိရတယျ။ အခုအဲ့ဒါတှကေို သိခှငျ့မရှိတော့ဘူး၊ ကိုယျစားလှယျတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှကေို သိခှငျ့မရှိတော့ဘူး၊ နောကျတဈခါ ကှနျပလိနျးတကျလာမယျ့အကွောငျးအရာတှကေို ခုံရုံးဖှဲ့ပွီးဆုံးဖွတျတာမြိုးတှမှော ဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုလညျး သိခှငျ့မရှိတော့ဘူး။ ဒီလိုမြိုးအခွခေံကတြဲ့ အရေးကွီးတဲ့အခကျြအလကျတှကေို ပိတျပငျထားလိုကျတဲ့အတှကျ ကမြတို့မြှျောလငျ့နတောက ၂၀၂၀သညျ ၂၀၁၅ တုနျးက သောငျပွိုကမျးပွိုနိုငျပွီးတော့ ပွညျသူလူထုတဈရပျလုံး ထဲထဲဝငျဝငျနဲ့ တငျမွှောကျပေးလိုကျတဲ့အစိုးရဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ ဟောဒီ ၂၀၂၀ သမိုငျးတှငျလာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈရမယျ။ လှတျလပျလိုကျတာ မြှတလိုကျတာဆိုတဲ့အခကျြတှနေဲ့ သိပိုငျခှငျ့တှအေမြားကွီးရှိလိုကျတာ ဘယျတုနျးကမှမတှခေဲ့ဘူးတဲ့ ပါတီတှအေနနေဲ့လညျး ဘယျတုနျးကမှ မကွုံခဲ့ဘူးတဲ့ ရှေးကောကျပှဲမြိုးကွုံရတယျဆိုတာမြိုး စောငျ့ကွညျ့သူတှအေတှကျလညျး ဘယျတုနျးကမှ မရဘူးတဲ့အခှငျ့အရေးရတယျဆိုတာမြိုး ကွုံရမယျ့အစား အခုလိုမြိုးအကနျ့သတျခံပွီးတော့ ၂၀၁၅တုနျးက စံခြိနျစံညှနျးကိုတောငျမှ ပွညျ့မှီအောငျ မဆောငျရှကျပေးနိုငျဘူးဆိုတော့ နညျးနညျးတော့ စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျရှငျ့”
NLD ပါတီက ဦးတငျအောငျကတော့ အတိုကျခံနဲ့ အာဏာရဆိုတာ မမွငျမတူနိုငျဘူးလို့ဆိုပါတယျ၊ “ကြှနျ‌တျောတို့ ၂၀၁၅တုနျးက ဝငျပွိုငျတဲ့အခြိနျတုနျးကတော့ အတိုကျအခံပေါ့လေ အတိုကျအခံရဲ့ဘဝကတြော့ ဘယျလိုဖွဈလညျးဆိုတော့ အားလုံးဟာ ထှကျပျေါလာတဲ့အမိနျ့တှေ၊ ညှနျကွားခကျြတှဟော တရားမြှတမှုရှိပါ့မလားဆိုတဲ့သံသယ အမွဲတမျးရှိတယျ။ အတိုကျခံဆိုရငျ ဒီအတိုငျးပဲရှိလရှေိ့ထရှိကွတယျ၊ ကတြျောတို့လညျးရှိခဲ့တာပဲ။ အဲ့တုနျးက ကျောမရှငျဥက်ကဌ ဦးတငျအေးပေါ့လေ ဦးတငျအေးက ထှကျလိုကျတဲ့ အမိနျ့တှေ၊ ညှနျကွားခကျြတှအေားလုံးဟာ ထှကျလိုကျတိုငျး ထှကျလိုကျတိုငျး ဟုတျပါ့မလား ဟုတျပါ့မလားဆိုပွီး နားစှနျ့နကွေရတာပေါ့။ တခါတဈလကေရြငျလညျး မကနြေပျတဲ့အခကျြတှေ အမြားကွီးကတြျောတို့ရှိတယျ။ ထှကျလိုကျတိုငျး ထှကျလိုကျတိုငျး ဒါငါတို့ကို နှိပျကှပျပွနျပွီထငျတယျ ဒီလိုပဲဖွဈကွရတယျ၊ နောကျပိုငျး ပွီးသှားတဲ့အခါကမြှပဲ ဒါကတော့ တရားမြှတတယျ တရားမမြှတဘူးဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ပွောလို့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ထှကျပျေါလာတဲ့အမိနျ့တှေ ညှနျကွားခကျြတှအေပျေါမှာတော့ အာဏာရမဟုတျတဲ့ အတိုကျအခံတှကေတော့ သံသယရှိမယျဆိုတာ အငွငျးမပှားပါဘူး။ အားလုံးဟာ ပွညျသူတှကေပဲ ဆုံးဖွတျရမှာဖွဈပါတယျ၊ ပွညျသူတှကေပဲ ပါဝငျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဥပမာထားပါတော့ မဲရုံမှာ မဲစာရငျးသှားကွညျ့မယျ။ မဲထညျ့တဲ့အခါမှာကလြညျး ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက သတျမှတျထားတဲ့နညျးလမျးတှအေတိုငျးပဲ ကာကှယျသှားလိုကျမယျဆိုရငျ ကိုဗဈကိုလညျးတှနျးလှနျရာရောကျမယျ။ မိမိထညျ့ခငျြတဲ့ပါတီ မိမိထညျ့ခငျြတဲ့ပုဂ်ဂိုလျကိုလညျး လှတျလှတျလပျလပျထညျ့လို့ရမယျ။ မဲလညျးမဖွဈမနသှေားပွီးတော့ ထညျ့သငျ့တယျ ကတြော့အနနေဲ့ ဒီနှဈခုတော့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျခငျဗြ” လို့ သူ့သဘောထားကို ပွနျလညျတငျပွသှားပါတယျ။
ဒီစကားဝိုငျးရဲ့ ဆှေးနှေးခကျြတှဟော အငျမတနျအားရစရာကောငျးပွီး အပွနျလှနျခပြေတာတှနေဲ့ မွိုငျဆိုငျလှပါတယျ။ ဆှေးနှေးခကျြတှကေိုပွနျခြုပျရရငျ ကိုဗဈကာလမို့ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ပေးထားတဲ့ ရကျ ၆၀ ဟာ အငျမတနျနညျးကွောငျး၊ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနနေဲ့ သီးခွားလှတျလပျတဲ့အဖှဲ့အစညျး ဖွဈသငျ့ကွောငျးနဲ့ လိုလားတဲ့ပါတီကို မကျြနှာသာပေးပွီး လူကြှံဘောဖမျးကစားနညျးတှကေို သတိထားသငျ့ကွောငျး တငျပွသှားကွပါတယျ။
နိဂုံးခြုပျကောကျနုတျရရငျ လှတျလပျပွီး တရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့ဆိုတာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအပျေါမှာ မူတညျသလို၊ တိကတြဲ့ညှနျကွားခကျြတှေ ခမြှတျဖို့လိုကွောငျး ၊ ပွညျသူအားလုံးပါဝငျဖို့နဲ့ မဲစာရငျးတှမှေားရငျ အမွနျပွုပွငျပွီး ကိုယျပိုငျဆိုငျတဲ့ မဲတဈပွားကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခပြွီး လိုလားတဲ့ပါတီကို မဲပေးကွဖို့လိုပါတယျ။ ၂၀၂၀ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျမှာကငျြးပမယျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲဟာ နိုငျငံတကာနဲ့ ပွညျတှငျးပွညျပစောငျ့ကွညျ့သူတှခြေီးကြူးရပွီး ပွညျသူရောနိုငျငံရေးအငျအားစုတှပေါ အားရကနြေပျမယျ့ လှတျလပျပွီးတရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့ ပွညျသူအားလုံးအတူပူးပေါငျးပါဝငျဖို့လိုသလို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရဲ့ အခနျးကဏ်ဍဟာ အငျမတနျအရေးကွီးကွောငျး ဒီတပတျ သုံးသပျတငျပွလိုကျရပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #ရှေးကောကျပှဲကာလ #ကိုဗဈနဲ့အခွားစိနျချေါမှုမြား
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ နီးသထက်နီးလာနေပါပြီ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးရင်ဆိုင်နေရာတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးကလည်း စိုးရိမ်ရဆဲကာလမှာရှိနေဆဲပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ဖို့ သတ်မှတ်မယ့် ရက် ၆၀ကာလဟာလည်း နီးကပ်နေပြီမို့ ဘယ်လို ဘေးကင်းအောင် မဲဆွယ်ကြမလဲ? တခြားအခက်ခဲတွေကရော ဘာတွေရှိနိုင်မလဲ ? လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ကြမယ့် ကိုယ်စားလှယ်သစ်တွေ၊ အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြုင်ဘူးတဲ့ လက်ရှိကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ VOM က စကားဝိုင်းလုပ်ပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီစကားဝိုင်းမှာ ပြည်သူ့ပါတီကနေ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒေါ်နိုင်နိုင်မော် ၊ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက် အမရပူရမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးတို့နဲ့အတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အောင်တို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးသိန်းထွန်းဦးက ၂၀၁၀မှာ သူတို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခြေအနေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဦးတင်အောင်ကလည်း ၂၀၁၅မှာ အလှပြယာဉ်တွေ လူစုလူဝေးတွေနဲ့ မဲဆွယ်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေကို ပြန်ပြောပြရင်း ခုလက်တွေ့ဖြစ်သင့်တာတွေကို စပြောပါတယ်။
“တစ်ခုလေးပြောစရာရှိတာက ကျတော်တို့ဆီက အရင်တုန်းကလို ကိုဗစ်ကာလလိုဟာမျိုး မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ၂ လဆိုတဲ့အချိန်ဟာ သိပ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပေမယ့် အခုမှစပြီးဝင်လာကြမယ့် ပါတီသစ်လေးတွေ ပါတီသစ်လို့ပဲပြောပါမယ်၊ ပါတီသေးလို့ ကျတော်မပြောရက်ပါဘူး ဘာလို့ဆိုတော့ ပါတီသစ်ပေါ့ဗျာ ပါတီသစ်တွေအတွက်တော့ ပြည်သူနဲ့ မိတ်ဆက်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍဟာ ၂ လဆိုရင်တော့ အင်မတန်မှနည်းလွန်းတယ်လို့မြင်တယ်လေ။ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာ တခြားအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုး နှိုင်းယှဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး သူတို့ကတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဟာ တစ်အိမ်တက်ဆင်းလုပ်ပြီးတော့ ပြောမယ်ပေါ့လေ ကျတော်တို့က ကိုဗစ်ကာလ ၁၅ ယောက်ဆိုလို့ရှိရင် လူစုလူဝေးလုပ်လို့ရတယ် ၊ အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဟာ မိမိပါတီရဲ့မူဝါဒ မိမိရဲ့ ရှေ့လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ်ထွက် ဝင်ထွက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာအကောင်းဆုံးပေါ့လေ သို့သော် ၂ လ အချိန်အတွင်းဆိုရင် ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်သေးဘူး ၊ လက်ရှိ အာဏာရလို့တော့ မပြောလိုပါဘူး၊ ပါတီကြီးတွေပေါ့လေ ပြည်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးသား ပြည်သူကသိပြီးသားဆိုတဲ့ ပါတီကြီးတွေအတွက်ကတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် နောက်ထပ်ပါတီအသစ်တွေအတွက်ကတော့ တော်တော်လေး အခက်အခဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တွေတိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ဒါကတော့ ကာလအနေအထားကိုမြင်လို့ပြောတာပါ။ အကယ်၍ ကိုဗစ်ကာလလည်းမဖြစ်ဘူး ၂၀၁၅တုန်းကလို ၂၀၁၀တုန်းကလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုတာဒီလိုပါ ရောဂါကိုကြောက်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့ အုန်းအုန်း အုန်းအုန်းနဲ့ သွားလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့လေ ၂ လဆိုတာနည်းတယ်ဆိုတာ ကျတော့်စိတ်ထဲမြင်ပါတယ် “ လို့ ဦးတင်အောင်က သူ့သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသွားပါတယ်။
ပြည်သူ့ပါတီက ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်ကတော့ တချို့ညွန်ကြားချက်တွေက ရှင်းလင်းတိကျမှုမရှိလို့ စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကို ခုလိုဆွေးနွေးပါတယ်။
“ ဒီနှစ်မှာမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကပ်ရောဂါနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ ဒါဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဖြစ်စဉ်ကြီးဆိုတော့ ရှေ့ပိုင်းမှာပြောဆိုလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ Plan တွေကတော့ ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်၊ အဓိကကတော့ ညွှန်ကြားချက်ရယ်လို့ သီးသန့်မရှိသေးဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးသည် နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ ချဉ်းကပ်မယ်။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတော့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စည်းရုံးရေးကာလတွေရောက်တော့မယ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စည်းရုံးရေးမှာတောင်မပြောနဲ့ ပါတီစည်းရုံးရေးမှာတောင်မှ အခုအခင်းအကျင်းက တော်တော်လေးကို ခက်ခဲ၊ကျပ်တည်းနေတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာ Plan 1,2ဆိုပြီးတော့ချထားတယ်၊ နောက်တစ် ချက်စောင့်နေတာ ဘာလည်းဆိုတော့ UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကို ကျမတို့မျှော်လင့်နေတယ်။ အခုဟာက သို့လော သို့လောတွေဖြစ်နေတယ်၊ အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတယ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတယ်၊ ဒေသန္တရရဲ့ ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအကုန်လုံးဟာ အခုသွားမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ ကျမတို့ပါတီတွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဥပဒေမူဘောင်ဖြစ်ရဲ့လား၊ လွပ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရာ အခုလိုကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလကို သွားမယ့်ဟာကို သီးသန့်မူဝါဒ တွေချပေးဖို့များရှိမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုတော့ စောင့်နေတယ်ပေါ့။”
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဦးသိန်းထွန်းဦးကတော့ တချို့ပြည်ထောင်စုအဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေ ပါတီလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရပြီး ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တာတွေလုပ်နေတာတွေဟာ မျှတမှုနည်းတာကြောင့် ဒီဥပဒေတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အခု ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ကစပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးတွေ မဲဆွယ်၊ ပါတီလုပ်ငန်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ထွက်ပေါ်လာတယ်။ စည်းရုံးရေးနဲ့ ပါတီလုပ်ငန်းလို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတလည်းပါမယ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေလည်းပါမယ်၊ သူက ၇ (ခ)နဲ့ ၁၇(ဃ)ကို ကုဒ်လုပ်ပြီးတော့ UECက ရွေးကောက်ပွဲစတင် ပြုလုပ်မယ့်ရက်ကို စတင်ကြေငြာတဲ့ရက်ကစပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတပါတာပေါ့နော် အဲ့ဒါတွေက ဒီလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီလိုဖော်ပြလာတယ်၊ ဒါက ၁ .၇.၂၀၂၀မှာ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ၂.၇.၂၀၂၀ မှာ UEC ကနေပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအစားထိုးလိုက်တာက နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ပါတီရုံးတွင်းမှာလုပ်နေတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာရဲ့ ကန့်သတ်ချက်များနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့ အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ ဒီလိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်တဲ့စာ ကျတော်တို့သွားတွေ့တယ်။ တစ်ဖက်မှာကြတော့ အနိုင်ရအဖွဲ့ကို ၁ ရက်နေ့မှာ ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးတယ်၊ တဖက်မှာကြတော့ သူတို့ကိုကြပ်မတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ကောင်းပြီ ဒါဆိုရင်စောစောတုန်းက UEC ကုဒ်လုပ်ထားတဲ့ ၇ (ခ)နဲ့ ၁၇ (ဃ) ကို ပြောမယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၉မှာ နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ ဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံဥပဒေဟာ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကြီးလို့ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတယ်။ ဒီတည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုဟာတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုသေးဘူးဆိုရင် အခြေခံဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်သမျှ အတည်ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်၊ အဲ့ဒါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၆ မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် စောစောက ၇(ခ)နဲ့ ၁၇(ဃ)ကို ကျတော်က ဘာနဲ့သွားပြန်ပြီးတော့ နှိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် ၆၄ မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ ပါတီလုပ်ငန်းများကို ၎င်းရဲ့ တာဝန်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဘူး။ ၂၃၂ ဋ မှာလည်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းမှာ ပါတီလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြထားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီဥပဒေလိုဟာမျိုးတွေကိုလည်း သုံးသပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ်ကလေး ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်။ “
ဦးသိန်းထွန်းဦးက အဲဒီလိုဆိုတယ်ဆိုတော့ ရှေ့နေလည်းဖြစ် လက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အောင်ရဲ့ သဘောထားဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ “မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ရတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး ပါတီနယ်မြေစည်းရုံးခွင့်ပေါ့လေ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ကို မဆုံးရှုံးစေရန်အလို့ငှာအတွက် နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်၊ သို့သော် ကန်ပိန်းအဆင့်တော့ လုပ်လို့မရသေးဘူး ဒါကတော့ အကုန်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးပါပဲ။” လို့ ပြန်လည်ချေပပါတယ်။ ဒါဆို ခုမှရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မယ့် အရင်ကသတင်းထောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ပါတီက ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်ကရော အရင် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ၂၀၁၅ နောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ ခြားနားချက်ဘာရှိလဲဆိုတော့
“၂၀၁၅မှာ UECမှာ ဘာရှိလည်းဆိုတော့ အရင်ဦးဆုံး စောင့်ကြည့်လေ့လာဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒါက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက စောင့်ကြည့်လေ့လာဆိုပြီးတော့ အခုချိန်မှာ စောင့်ကြည့်ဆိုတာကို ဖြုတ်လိုက်တယ်၊ လေ့လာဆိုတာပဲထားလိုက်တယ်။ ဒါက ပထမဦးဆုံး ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လိုက်ရတဲ့အချက်ပေါ့နော်၊ ဘာကြောင့်မို့လို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာကြတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကို စဉ်းစားတယ်။ စဉ်းစားတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေသေးတယ်၊ နောက် ဥပဒေမူဘောင်တွေ ခိုင်မာမှုအားနည်းတယ်၊ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာကိုသွားနေသေးတဲ့ ကျမတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာ တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်ချမ်းနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရာအတွက် အခုလိုမျိုးလေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေ ရှိကိုရှိနေသင့်တယ်။ အဲ့ဒါက စံနှုန်းတစ်ခုပဲ ကျမတို့က အဲ့ဒါကို ကြိုဆိုတယ်၊ ဖိတ်ခေါ်တယ်၊ အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနေဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်။ ဒီချိန်မှာ စောင့်ကြည့်ဆိုတာကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် လေ့လာမှုတစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက် ဘာပါဆုံးရှုံသွားသလဲဆိုရင် ဆက်စပ်ပေါ့ မီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါလျော့နည်းသွားတယ်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေ စောင့်ကြည့်ချက်တွေ ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေကိုင်ပြီးတော့ သူတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီ စာတန်းတွေထုတ်ပြန်နေတယ်၊ အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကို ကိုးကားပြီးတော့ မီဒီယာတွေကလည်း သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ သူတို့တွေကိုသွားပြီးတော့ အင်တာဗျူးမယ်၊ ပြည်သူလူထုကို အချိန်နဲ့တပြေးညီချပြမယ်။ ဒီလိုကန့်သက်လိုက်ခြင်းဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့သိပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ ပါတီငယ်တွေ အခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီးတော့နစ်နာရတယ်ပေါ့ ဒါကတော့ မြင်ရတဲ့အချက်ပေါ့။ နောက်ထပ်အချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲလက်မှတ်တွေကို ရိုက်နှိပ်တဲ့အချိန်မှာ အရင်တုန်းက နေပြည်တော်မှာ ရိုက်တယ်၊ ၂၀၁၅ မှာတုန်းက မဲလက်မှတ်ရိုက်တာကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်လောက်ရိုက်သလဲ ဘယ်သယ်သွားလဲ၊ ဘာလုပ်လဲဆိုတာ အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ မဲလက်မှတ်က ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ ဘယ်လောက် ရိုက်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိရတယ်။ အခုအဲ့ဒါတွေကို သိခွင့်မရှိတော့ဘူး၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိခွင့်မရှိတော့ဘူး၊ နောက်တစ်ခါ ကွန်ပလိန်းတက်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကို ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း သိခွင့်မရှိတော့ဘူး။ ဒီလိုမျိုးအခြေခံကျတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကို ပိတ်ပင်ထားလိုက်တဲ့အတွက် ကျမတို့မျှော်လင့်နေတာက ၂၀၂၀သည် ၂၀၁၅ တုန်းက သောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ တင်မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဟောဒီ ၂၀၂၀ သမိုင်းတွင်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရမယ်။ လွတ်လပ်လိုက်တာ မျှတလိုက်တာဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ သိပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိလိုက်တာ ဘယ်တုန်းကမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ ပါတီတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကြုံရတယ်ဆိုတာမျိုး စောင့်ကြည့်သူတွေအတွက်လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မရဘူးတဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာမျိုး ကြုံရမယ့်အစား အခုလိုမျိုးအကန့်သတ်ခံပြီးတော့ ၂၀၁၅တုန်းက စံချိန်စံညွှန်းကိုတောင်မှ ပြည့်မှီအောင် မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ရှင့်”
NLD ပါတီက ဦးတင်အောင်ကတော့ အတိုက်ခံနဲ့ အာဏာရဆိုတာ မမြင်မတူနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်၊ “ကျွန်‌တော်တို့ ၂၀၁၅တုန်းက ဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ အတိုက်အခံပေါ့လေ အတိုက်အခံရဲ့ဘဝကျတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လည်းဆိုတော့ အားလုံးဟာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမိန့်တွေ၊ ညွန်ကြားချက်တွေဟာ တရားမျှတမှုရှိပါ့မလားဆိုတဲ့သံသယ အမြဲတမ်းရှိတယ်။ အတိုက်ခံဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲရှိလေ့ရှိထရှိကြတယ်၊ ကျတော်တို့လည်းရှိခဲ့တာပဲ။ အဲ့တုန်းက ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးပေါ့လေ ဦးတင်အေးက ထွက်လိုက်တဲ့ အမိန့်တွေ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေအားလုံးဟာ ထွက်လိုက်တိုင်း ထွက်လိုက်တိုင်း ဟုတ်ပါ့မလား ဟုတ်ပါ့မလားဆိုပြီး နားစွန့်နေကြရတာပေါ့။ တခါတစ်လေကျရင်လည်း မကျေနပ်တဲ့အချက်တွေ အများကြီးကျတော်တို့ရှိတယ်။ ထွက်လိုက်တိုင်း ထွက်လိုက်တိုင်း ဒါငါတို့ကို နှိပ်ကွပ်ပြန်ပြီထင်တယ် ဒီလိုပဲဖြစ်ကြရတယ်၊ နောက်ပိုင်း ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှပဲ ဒါကတော့ တရားမျှတတယ် တရားမမျှတဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမိန့်တွေ ညွှန်ကြားချက်တွေအပေါ်မှာတော့ အာဏာရမဟုတ်တဲ့ အတိုက်အခံတွေကတော့ သံသယရှိမယ်ဆိုတာ အငြင်းမပွားပါဘူး။ အားလုံးဟာ ပြည်သူတွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ပြည်သူတွေကပဲ ပါဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဥပမာထားပါတော့ မဲရုံမှာ မဲစာရင်းသွားကြည့်မယ်။ မဲထည့်တဲ့အခါမှာကျလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတိုင်းပဲ ကာကွယ်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုဗစ်ကိုလည်းတွန်းလှန်ရာရောက်မယ်။ မိမိထည့်ချင်တဲ့ပါတီ မိမိထည့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထည့်လို့ရမယ်။ မဲလည်းမဖြစ်မနေသွားပြီးတော့ ထည့်သင့်တယ် ကျတော့အနေနဲ့ ဒီနှစ်ခုတော့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျ” လို့ သူ့သဘောထားကို ပြန်လည်တင်ပြသွားပါတယ်။
ဒီစကားဝိုင်းရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေဟာ အင်မတန်အားရစရာကောင်းပြီး အပြန်လှန်ချေပတာတွေနဲ့ မြိုင်ဆိုင်လှပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုပြန်ချုပ်ရရင် ကိုဗစ်ကာလမို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ ရက် ၆၀ ဟာ အင်မတန်နည်းကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သင့်ကြောင်းနဲ့ လိုလားတဲ့ပါတီကို မျက်နှာသာပေးပြီး လူကျွံဘောဖမ်းကစားနည်းတွေကို သတိထားသင့်ကြောင်း တင်ပြသွားကြပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ကောက်နုတ်ရရင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပေါ်မှာ မူတည်သလို၊ တိကျတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေ ချမှတ်ဖို့လိုကြောင်း ၊ ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဖို့နဲ့ မဲစာရင်းတွေမှားရင် အမြန်ပြုပြင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မဲတစ်ပြားကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး လိုလားတဲ့ပါတီကို မဲပေးကြဖို့လိုပါတယ်။ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာကျင်းပမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပစောင့်ကြည့်သူတွေချီးကျူးရပြီး ပြည်သူရောနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါ အားရကျေနပ်မယ့် လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ ပြည်သူအားလုံးအတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုသလို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အင်မတန်အရေးကြီးကြောင်း ဒီတပတ် သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ရွေးကောက်ပွဲကာလ #ကိုဗစ်နဲ့အခြားစိန်ခေါ်မှုများ
Interview, မွနျမာသတငျး, သတငျး, သုံးသပျခကျြ